Global Voices teny Malagasy » Voalohany no nahitana katsatsaka leopara tany Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Mey 2019 6:11 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Mediam-bahoaka, Siansa, Tontolo_iainana, Tsidika, Vaovao Tsara
Katsatsaka leopara. Sarin'i  Matt Reinbold tao amin'ny Flickr. (CC BY-SA 2.0)
Noraketina vao haingana  ho karazam-biby vaovao ho an'i Nepal ny katsatsaka leopara  (Eublepharis macularius) ; Raha nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny karazana gecko (katsatsaka) faha 11 ao amin'ny firenena ny mpikaroka Nepaley sy ny mpankafy natiora dia nanomboka niahiahy ihany koa ny mpandala ny tontolo iainana sasany fa mety ho lasibatra amin'ny varotra biby an-tsokosoko anaty ala ity biby ity.
Nanolo-kevitra ilay manampahaizana momba ny biby mandady Karan Shah raha namoaka sarinà gecko (katsatsaka) hafahafa tao amin'ny Facebook i Yam Bahadur Rawat, fa mety ho karazany vaovao ho an'i Nepal ilay biby. “Nesoriny avy eo ilay lahatsoratra ary voamarina tamin'ny fikarohana fanampiny fa vaovao tanteraka izany ho an'i Nepal” hoy Shah, niresaka tamin'ny Global Voices.
Namoaka lahatsoratra  tao amin'ny Facebook ny iray tamin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fikarohana, Jeevan Thapa :
Faly aho mizara ny karazana androngo vaovao hita avy eto Nepal. Nanampy fianakaviana, karazana ary karazam-biby herpetofauna avy eto Nepal ity fanadihadiana avy eto an-toerana ity. Ankehitriny, lasa karazam-biby gecko faha-11 ho an'i Nepal io biby io.
Ny nahitana voalohany ny karazana katsatsaka leopara roa, izay tsy miseho afa-tsy amin'ny alina dia hita natory nandritra ny ririnina  tany anaty ala ara-biolojika Kamdi any amin'ny Distrikan'ny Banke  ao andrefan'i Nepal. Mampifandray ny Valan-javaboahary Nasionaly Banke ao Nepal amin'ny Valan-javaboahary Masina Suhelwa any Uttar Pradesh, India ny ala. Voalaza fa hita tany amin'ny faritra maina tany Afghanistan, avaratra-andrefan'i India ary Pakistan ireo geckos miafina anaty tany. Na izany aza, dia hita tao amin'ny faritra iray antsoina hoe sal (Shorea robusta) tany anaty ala mihitsan-dravina mifangaro tany Nepal no voalohany nahitana azy ireo tamin'ny 30 Desambra 2016.
Nahita porofo hafa nahitana ny katsatsaka leopara niseho tany amin'ny toerana hafa ihany koa ny ekipa tatỳ aoriana. Tamin'ny 18 Aprily 2017, nisy katsatsaka leopara roa hafa hita tao amin'ny Distrikan'i Nawalparasi ary ny 10 Jona 2018 tany amin'ny distrikan'i Surkhet any andrefan'i Nepal.
Nanoratra tao amin'ny lahatsoratra mitatitra momba ny fikarohana  ny ekipa:
Tsy mbola hita tany Nepal raha tsy amin'izao fotoana ny Katsatsaka leopara. Mety noho ny natioran'ity karazam-biby ity izay miafina amin'ny alina no nahatonga izany na noho ny fikarohana voafetra momba ny biby mandady sy anaty rano any andrefan'i Nepal. Manondro ireo fahitana vaovao avy amin'ny faritra miisa telo samihafa fa mety ho betsaka kokoa ny fiparitahan'ity karazam-biby ity any Nepal, anisan'izany ny ao amin'ny Valan-javaboary Nasionaly Banke, izay eo anelanelan'ireo toerana nahitana azy ireo.
Tsy toy ny katsatsaka hafa izy ireo fa mivezivezy ny hodi-masony fa saingy tsy mihazona amin'ny fihanihana kosa ny rantsany  – midika izany fa afaka manokatra sy manakimpy ny masony mandritra ny torimasony izy ireo saingy tsy afaka mihanika ny toerana mijadona malama. Manana tongotra kely miaraka amin'ny rangotra malefaka izy ireo. Miaina hatramin'ny 20 taona izy ireo ary misy aza ny sasany hatramin'ny 30 taona raha ompiana.
Lafo sady be mpitady
Ireo katsatsaka tsara tarehy, na izany aza dia amidy amin'ny fomba ara-dalàna sy tsy ara-dalàna noho ny fangatahana maro avy amin'ireo mpitia biby anaty ala.
Gecko avy any Hardwick (NA katsatsaka leopara Indiana)
Fa maninona no tsy manana aho: SAROTRA tadiavina, ary TENA MAMPITENY NY MOANA ny halafony rehefa misy izy ireo noho izy be mpitady. Mitovy amin'izany ihany koa ny Eublepharis Sp hafa. TSY katsatsaka leopara izy io.
Araka ny tatitra nataon'ny gazetiboky Reptiles , mitentina 20 $ hatramin'ny 3 000 $ Amerikana ny katsatsaka leopara ompiana. Na izany aza, araka ny notaterin'ny DC Nepal , nogiazan'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny sisintanin'i Nepal-India ny katsatsaka leopara miisa dimy izay mitombam-bidy 184 tapitrisa NRs (1,65 tapitrisa dolara).
Midika ny fivarotana tsy ara-dalàna ireo katsatsaka ireo na dia heverina ho avy any India aza izy ireo fa mety ho lasibatry ny mpivarotra ihany koa ny katsatsaka leopara avy any Nepal . Na izany aza, tsy ahitana ireo karazam-biby tsara tarehy ireo ny Lisitra Mena avy amin'ny IUCN  mirakitra ireo karazam-biby tandindonin-doza. Noho izany, nanolo-kevitra ny hanisana antsipirihany ireo katsatsaka leopara ao Nepal ny ekipa mpikaroka mba hamantarana bebe kokoa ny fiparitahany ary hanampy amin'ny fiarovana ireo karazam-biby manintona olona ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/03/138132/
 Noraketina vao haingana: https://thehimalayantimes.com/nepal/ground-dwelling-lizard-found-in-nepal-named-baghe-mausuli/
 katsatsaka leopara: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_leopard_gecko
 Namoaka lahatsoratra: https://www.facebook.com/jeevan.somai/posts/10218751554559429
 Jeevan Thapa: https://www.facebook.com/jeevan.somai
 hita natory nandritra ny ririnina: https://www.researchgate.net/publication/331979702_First_Records_of_the_Common_Leopard_Gecko_Eublepharis_macularius_Blyth_1854_Eublepharidae_in_Nepal?fbclid=IwAR2JGCRmfqHkwHN9LCu941WIPoOSF5zmCyatgsZYWEoS_1sVe1jxgd9cTYE
 Distrikan'ny Banke: https://en.wikipedia.org/wiki/Banke_District
 tsy mihazona amin'ny fihanihana kosa ny rantsany: http://www.animalplanet.com/pets/other-pets/leopardgecko/
 gazetiboky Reptiles: http://www.reptilesmagazine.com/Care-Sheets/Lizards/Leopard-Gecko/
 DC Nepal: http://www.dcnepal.com/-49551
 Lisitra Mena avy amin'ny IUCN: https://www.iucnredlist.org/